Magaalo weyn - Wikipedia
Magaalo weyn ama wadajir ilbaxnimo (Ingriisa:Metropolitan area) Erayga waxaa loogu yeeraa magaalooyin waaweyn marka la eego xaafadaheeda, magaalooyinka iyo tuulooyinka اla deriska ah. waa xarun weyn kana kooban tiri ballaaran ee dad ah iyo shaqaalaha ku xiran goobtaa, dhul ballaaranna ku fadhisa, sida caadada ah taas baa qaadan karta magaalo weyn.
waxaa lagu tiriyaa Tokyo goobaha ugu badan dhanka ilbaxnimada caalamka.
Adduunka meel ay bulsho ku uruursantahay waxaa ugu weyn Tokyo ee Jabaanka waxa uu ku fidsanyahay dhismayaasheeda si aan kala go' lahayn awoodeeda 10,000 KM²، waxaana dagan 30 milyan qof, kana kooban magaalooyin badan ee yaryar saddex magaalo oo waaweyn.
Metroobolitaan eeriya waa eray loo soo gaabiyo mararka qaar Metroowga dhulka hoose mara, waxaa haboon in aan qalad loo fahmin waxaa loola jeedaa metroogga dhulka hoose mara iyo Dhabaha Tareenka ee magaalada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Magaalo_weyn&oldid=188141"
Last edited on 20 Diseembar 2018, at 09:27
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 20 Diseembar 2018, marka ee eheed 09:27.